မြသန်းတင့်- ကျွန်တော်နှင့် ဂျာနယ်ကျော်မမလေး (၂) | Ma Shwe Mi
မြသန်းတင့်- ကျွန်တော်နှင့် ဂျာနယ်ကျော်မမလေး (၁)	မြသန်းတင့်- ကျွန်တော်နှင့် ဂျာနယ်ကျော်မမလေး (၃)
1. မောင်မျိုး | June 13, 2010 at 6:51 pm
ဒီပို့စ်တွေ အတွက်ကျေးဇူး ခု ၂ ပုဒ်ဖတ်သွားပြီး နောက်နေ့လာထပ်ဖတ်အုံးမယ် ။ အစ်မ နောက်ထပ်ဖတ် ဖတ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ်တွေကကော ကျနော်ကစာအုပ်သရဲ အငတ်ခံပြီး စာအုပ်တွေဝယ်၂စုဖြစ်တယ်း)
2. mashwemi | June 14, 2010 at 10:55 pm
ရေးပါဦးမယ် မောင်မျိုး။ အခုတလော မအားသေးလို့ပါ ။ ရွှေကူမေနှင်းရဲ့ တခါတုန်းက တက္ကသိုလ် စာအုပ်ကို ဖတ်ပြီးညွန်းချင်နေတာ။ ကျွန်မလည်း ရန်ကုန်ကနေ ဘာမှသိပ်မမှာဖြစ်ဘူး။ စာအုပ်တွေပဲမှာတယ်။ ပြန်ရင်လည်းစာအုပ်တွေပဲဝယ်တော့ အိမ်မှာလည်း တအိမ်လုံးစာအုပ်တွေချည်းပဲ။ စာအုပ်တွေကိုကြွားတဲ့ပို့်စ် တခုလောက်လဲ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်ဦးမှပဲ ထင်တယ် 😛
3. suuchit | April 30, 2010 at 12:59 pm
ဆရာမြသန်းတင့်ရဲ့ ဂျာနယ်ကျော်အကြောင်း ဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်… စောင့်မျှော်ဖတ်နေပါမယ်…
4. mashwemi | April 30, 2010 at 3:16 pm
ကြီးစု တစ်ယောက် ဒါကိုဘယ်လိုတွေ့သွားပါလိမ့် …မရေးဖြစ်တာနဲနဲကြာပီ.။ ပြန်ရိုက်ပေးဦးမှပဲ။ ကြီးစုစောင့်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ 😛
5. s | April 18, 2010 at 10:36 pm
မဖတ်ဖူးသေးလို့ ဖတ်သွားပါတယ်။ လက်ညောင်းခံ ပြန်ရိုက်တင်ဖူးတာကျေးဇူး
6. mashwemi | April 18, 2010 at 11:13 pm
🙂 ဟုတ်တယ် စင်စင် ..ဘလော့ကိုပစ်ထားတာကြာပြီ။ ခုတလောမှ ဂျာနယ်ကျော်မမလေး အကြောင်းတွေ ပြောမိတာများတာရယ်။ april6က ဂျာနယ်ကျော်မမလေး ကွယ်လွန် တာ ၂၈ နှစ် ရှိပြီ ဆိုပီး အမှတ်တရ ရိုက်တင်နေတာ. လာဖတ်တာကျေးဇူးပါ 🙂
7. mashwemi | April 18, 2010 at 10:34 pm
🙂 လာဖတ်တာကျေးဇူးပါ။ ရင်တွင်းဖြစ်တော့ရေးဖြစ်ဦးမယ်မထင်ဘူးရှင့်။ ကျမအရမ်းသဘောကျတဲ့စာရေးဆရာမကြီးဂျာနယ်ကျော်မမလေး အကြောင်း ဆရာမြသန်းတင့်ရေးထားတာကို ဖတ်ဖူးတဲ့သူသိပ်မရှိသေးတာနဲ့ ရိုက်တင်ပေးနေတာပါ။ 🙂
8. naythanlynn | April 18, 2010 at 9:41 pm
မရွှေမိဆိုတာ ဘယ်သူလဲ သိနေသလိုပဲ
ဖေ့ဘွတ်မှ တဆင့် ၀င်ရောက်အလည်လာပီး ဖတ်သွားပါတယ်
ဒါနဲ့ ဂျာနယ်ကျော်မမလေး ကြောင်းပဲ ရေးတော့မှာလား ဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ရင်တွင်းဖြစ် အတို၊ အရှည်တွေလဲ ဖတ်ပါရစေ >>